मास्क महँगोमा बेचेमा वा लुकाएमा निशुल्क: ११३७ मा फोन गर्न सरकारको आग्रह ! – Life Nepali
मास्क महँगोमा बेचेमा वा लुकाएमा निशुल्क: ११३७ मा फोन गर्न सरकारको आग्रह !
अहिले बि’स्वमा महा’मारीको रुपमा फै’लिदै गएको को’रोना, भा’इरसवाट ब’च्न मा’क्स ल’गाउन सु’झाव दिइएपछि अहिले, नेपाली व’जारमा मा’क्स अभाव, भएको छ । ब्यापारीहरुले, का’लो वजारी गर्दै माक्स लुकाउन थालेपछि, पनि अभाव, देखिएको हो । अहिले वजारमा मा’क्स किन्न पनि नपाईने र पाइए, पनि त्यसको वास्तविक मुल्य भन्दा दोब्बर तेब्बर मुल्य तिर्नुपर्ने अवस्था छ । ब्या’पारीहरुले भएको मा’क्स पनि लुकाएर कालो वजारी गर्न थालेपछि, सरकारले पैसा नलाग्ने (निशुल्क) फोन नम्बरमा फोन गर्न आम नेपालीलाई आ’ग्रह गरेको छ ।
कालो वजारी गरेर वजारमा माक्सको अभाव गराउने ब्यवसायीलाई कारवाही गर्ने भन्दै सरकारले फोन गरेर जानकारी दिन आग्रह गरेको हो । बजारमा मास्क, नपाइने र पाइए पनि महँगो पर्ने गुनासो बढेपछि पैसा नलाग्ने फोन नम्बर ११३७ मा खबर गर्न वा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा जानकारी गराउन विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले आग्रह गरेका हुन् । उजुरीको आधारमा सरकारले अनुगमन गरी दोषी पाइए, तीन लाख रुपैयाँसम्म, जरिबाना तिराउने, र मुद्दा चलाउने तयारी सरकारले गरेको छ । त्यसरी माक्स, लुकाएर मुल्य बढाउने, केही ब्यापारीलाई कारवाही समेत गरिएको छ ।
मास्क लुकाउने काठमाडौंको क्षेत्रपाटीमा रहेको नेपाल केयर सर्जिकल सप्लायर्सलाई दुई लाख रुपैयाँ जरिबाना, तिराएको, विभागले बताएको छ । यस्तै बिलबिना, नै महँगोमा मास्क, बेच्ने त्रिपुरेश्वरको स्वस्तिक, सर्जिकल सप्लायर्सलाई २० हजार र सचिन ट्रेड कन्सर्नलाई १० हजार रुपैयाँ तथा त्रिपुरेश्वरको खनाल सर्जरी सप्लायर्स, अर्चना सर्जिकल र फिस्टेल सर्जिकललाई पाँचरपाँच हजारका दरले जरिबाना तिराएको विभागका महानिर्देशक सुवेदीले जानकारी दिएका छन् । अनुगमनक क्रममा त्यसरी कालोवजारी गर्ने अन्य ८ ब्यापारीलाई पनि सचेत गराइएको जानकारी दिए ।
Previous जापानी भाषा परीक्षाको फर्म खुल्यो’
Next आज असिना पानी सहित् ठुलो ,हावाहुरी र चट्याङको ख’तरा !